हुन्डाइका नेक्स्ट जेन आइ टेन १.१ ली. गाडि नेपाली बजारमा - Technology Khabar
» हुन्डाइका नेक्स्ट जेन आइ टेन १.१ ली. गाडि नेपाली बजारमा
हुन्डाइका नेक्स्ट जेन आइ टेन १.१ ली. गाडि नेपाली बजारमा
काठमाडौं, २३ कातिक । नेपालका लागि हुन्डाइ गाडिको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आइतवारदेखि नेपाली बजारमा नेक्स्ट जेन आइ टेन १.१ ली. को विक्री शुरु गरेको छ । नौलो डिजाइन र रुप साथै समकालीन विशेषता सहितको नेक्स्ट जेन आइ टेन १.१ ली. उपभोक्तामा लोकप्रिय हुनुको साथै अघिल्लो हुन्डाइको अपार सफलतालाई दोहोर्याउने अपेक्षा कम्पनीले लिएको छ ।
आकर्षक डिजाइन र विश्वस्तरीय शैलीका साथै प्राविधिक रुपमा परिस्कृत र 1.1 iRDE2इन्जिन सहितको नयाँ हुन्डाई आइ टेनले [email protected] को अधिकतम शक्ति र [email protected] को अधिकतम टोर्क प्रदान गर्दछ । BSIVअनुरुप डिजाइन गरिएको इन्जिनले इन्जिन कार्यकुशलता, प्mयूल खपत, धुवाँ उत्सर्जन र प्रदर्शनमा सुधार ल्याएको छ ।
त्यसका साथै यस हुन्डाइ आइ टेनमा सात इन्च टच स्क्रीन अडियो सिस्टम र ब्लु टुथ जस्ता विशेषताहरु प्नि समावेश गरिएको छ । साथै, कम्पनीले नगद छुट र एक वर्षे निःशुल्क बीमाको पनि व्यवस्था गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक रुपेश शर्मा भट्टले नयाँ वर्गका उच्च स्तरका उत्पादन ल्याउन हुन्डाइ सधै अग्रसर रहिआएको बताए । उपभोक्तामा नयाँ आइ टेन १.१ ली. ल्याउन पाएकोमा हामी हृदयदेखि नै हर्षित भएको भन्दै उपभोक्ताको परिवर्तनमुख अभिरुचिलाई मध्यनजर गर्दै हुन्डाइले उपभोक्तालाई सन्तुष्टी प्रदान गर्न निरन्तर प्रयास जारी राख्ने स्पष्ट पारे । अघिल्लो बर्ष हुन्डाइ आइ टेनले पाँच वर्षको समय अवधिमा ५००० भन्दा बढी गाडि विक्री गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
स्टाइल, माइलेज, परफरमेन्स, स्पेस, लो मेन्टेनेन्स र रिसेल भ्यालुमा उत्कृष्ट रहेको हुन्डाई आइटेनलाई सवै वर्गका उपभोक्ताले रुचाएका छन् । हुन्डाइ आइटेनले गाडि उपभोक्ता, उत्पादक र विशेषज्ञहरुको माझ प्रतिष्ठित “ICOTY 2008” पुरस्कार जित्न सफल भएको थियो । नेपालभित्र मात्रै ५५०० भन्दा बढी उपभोक्ता भएको हुन्डाइ आइ टेन वर्षौदेखि संसारभर उपभोक्ताहरुले रुचाउँदै आईएको ह्याचब्याक गाडि हो ।
उपर्युक्त नीति नहुँदा बजेट कार्यान्वयन भएन–पूर्व अर्थमन्त्रीहरु
एशियन प्यासिफिक एसोसिएशन अफ बैंकिंग इन्स्टिच्यूटको सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न
नेपालीहरुको उद्धारमा सलाम एयरको सहयोग, १६६ जना ओमानबाट स्वदेश फिर्ता
साझा बसमा टेलिकमको हटस्पट वाईफाई सेवा